Mureza dials uye tachymeter ewatchOS 7 | Ndinobva mac
Mureza dials uye tachymeter ewatchOS 7
Kuuya kunokwanisika kwenzvimbo nyowani dzeApple Watch ndicho chinhu chatinogona kutarisira mune inotevera vhezheni yeOSOS 7, muchokwadi yega yega vhezheni yesystem inowedzera zvimwe zvitsva kuitira kuti vashandisi vasarudze yavanoda zvakanyanya. Pane ino chiitiko uye nekuda kwekudonha kwekodhi yakaburitswa neanozivikanwa wepakati 9To5Mac, zvinozivikanwa kuti watchOS 7 ichawedzera nharaunda nyowani inonzi pasi rose uye mumwe kudaidzwa Infograph Pro.
Tinogona kutaura kuti iyo pasi rose ndiyo ichawedzera iyo mireza yenyika dzakasiyana (isu tinofungidzira izvo zvevose) uye iyo Infograph Pro uchave mutariri wekuwedzera tachymeter yekuyera kumhanya. Hongu, zvirokwazvo vazhinji venyu havadi ruzivo urwu asi zvakanaka kuti ivo vari kuwedzera sarudzo munzira yematambudziko mumatunhu avo. Nhau dziri mushanduro iyi zvine musoro dzinowedzera kusimudzira mukugadzikana uye kuchengetedzeka kwesystem, chimwe chinhu chinowanzo kuwedzerwa mune yega yega vhezheni dzinoburitswa dzese dzeWOSOS uye neese Apple's OS.
Sarudzo yekugovana nharaunda kuburikidza nemeseji kana AirDrop ichave ichishanda mune iyi vhezheni itsva yeiyoOSOS 7 inoshanda sisitimu, saka hatigone kutaura kuti inhau dzinoshamisa asi inhau. Chero zvazvingaitika, tinotarisira kuti ichi chikamu chidiki chekuvandudza uye kuti tine zvakawanda mumashoko ekuratidzira ehurongwa hwekushanda kweiyo Apple wachi, iyo yatinotarisira kuti inogona kuitwa mumwedzi waJune paWWDC, kunyangwe iri ndichiri kure.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Mureza dials uye tachymeter ewatchOS 7
WWDC 2020 ichave iri "chiitiko chitsva pamhepo"
Ese maApple Stores muChina ave kuvhurika veruzhinji